Nidaamka Wicitaanka Taksiga ee Dhacdooyinka Casriga ah ee 'EnTaksi Izmir' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirNidaamka Wicitaanka Casriga ah ee Taleefoonnada Casriga ah ee 'EnTaksi İzmir' ayaa La bilaabay
nidaamka cusub ee tagaasida tagaasida nambarada entaksi izmir waxay gashay adeeg
Marxalad cusub oo ku saabsan gaadiidka tagaasida ayaa ka bilaabatay İzmir. Nidaamka cusub ee tagaasida tagaasida casriga ah ee loo yaqaan 'EnTaksi İzmir girdi' ayaa maanta la galiyay.
U dhaqaaqista sidii uu u noqon lahaa magaalo caqli badan, İzmir wuxuu qaaday tallaabo cusub safarka shaqsiyeed. Nidaamka casriga cusub ee tagaasida casriga ee loo yaqaan 'EnTaksi Izmir' waxaa soo saaray Rugta Darawalada iyo Ganacsatada Gawaarida iyagoo kaashanaya Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir.
entaks Izmir Kaya Hotel kulul ee hadalka ah ee shirka hordhaca ah ee maanta Izmir Metropolitan Duqa Tunç Soyer, dawladdu maalgaliso, oo sheegaya in mashruuca noocan oo kale ah waa ugu horeysay si ay u hirgeliyaan Izmir ee magaalada ee Turkey "qabsado of Age ah, waa in aan ka hor tago fursadaha ay bixiyaan xilligii." Soyer wuxuu sheegay in dalabkaani yahay bilow ayna ka shaqeyn doonaan hormarinta adeegyada tagaasida ee Izmir. Annaga, haddaan nahay Maamulka Magaalada Magaala-weyn ee Izmir, kuma tartameyno ganacsatadayada. Taas bedelkeeda, waxaan sameyneynaa wax kasta oo aan awoodno si aan ugu fududaato ganacsatadayada.
Codsigii ugu horreeyay ee Izmir
Izmir Chamber of Drivers iyo Vehicle Anik Guddoomiyaha Galili, "mid ku salaysan jiilka cusub ee gacanta ku-markii ugu horeysay ee maamulka iyo qolladaha hoose ee Izmir ee dalka Turkiga, waxaan codsan nidaamka taxi digital," ayuu yiri. Teknolojiyada Ik Technology waxay sii wadaysaa inay u dhaqdhaqaaqdo sida noolaha nool, kuwa la qabsan kara isla markaana nool, kuwa aan odhan karin nabad gelyo. Hadaadan xakamayn karin isbedelkan, waad ka baxsan tahay tartanka. Waa inaan horumarino oo aan dib u cusbooneysiinno nafteena. Waa inaan la qabsanaa si aan ula socono horumarka adduunka ee ku saabsan taksiga iyo gaadiidka ”.
Soyer ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee adeegsada arjiga
Kulankii horudhaca ahaa kadib, qofkii ugu horreeyay ee adeegsada dalabka EnTaksi İzmir wuxuu ahaa Tunç Soyer, Duqa Magaalada İzmir ee Magaalo Weyn. Soyer, Izmir Chauffeur iyo Rugta gawaarida gawaarida ganacsiga ayaa safar gaaban ku soo maray gaariga ay gacanta ku hayaan Celil Anik. Soyer wuxuu kaloo tijaabiyey tagsi VIP ah oo leh sideed rakaab oo lagu geli karo barnaamijka EnTaksi İzmir.
Sidee buu u shaqeeyaa dalabka T EnTaksi İzmir?
Codsiga EnTaksi İzmir kaas oo gudbiya imtixaanadii lagu qabtay Xarunta Gaadiidka İzmir (İZUM) wuxuu adeegsi taksi u fidiyaa muwaadiniinta isagoo adeegsanaya codsi. Codsigu wuxuu siiyaa taksiga ugu dhow isticmaalaha. Rakaabka ayaa arki kara qofka darawallada taksiga ka ah arjiga oo akhriyi doona faallooyinka darawalka. Codsiga EnTaksi Izmir wuxuu sidoo kale bixiyaa taageerada luqadda Ingiriisiga.
Tagaasida VIP-ga sidoo kale waxaa lagu heli karaa iyada oo loo maro barnaamijka EnTaksi İzmir. Tagaasida VIP-da ayaa bixiya adeegyo gaadiid qaali ah oo sideed baabuur ah oo leh telefishan TV, qadka internetka, mashiinka shaaha / kafee, qaboojiyaha iyo amaan.
Basaska Cusub ee Wax-soosaarka Khaaska ah ee İzmir
Basaska Dheeriga ah ee Korontada ee laga bilaabay İzmir
Maanta taariikhda: 4 November 1955 Eskişehir cusub ayaa loo adeegsaday.
İzmir Chauffeurs iyo Autoists Rugta Farshaxanada
Xarunta Gaadiidka ee Izmir
nidaamka taksiga dijitaalka ah
EnTaksi İzmir codsi